Mpampihavana tsy mihavana amin’ny hafa hoe? – Malag@sy Miray
Taorian’ny resabe momba ny fisitahan’andriamatoa isany Andry Rajoelina sy Zafy Albert (eto amin’ny sary, tao anatin’ny hetsika momba ny fampihavanam-pirenena nokarakarain’ny FFKM dia misy ihany koa ny resaka mivoaka eny anivon’ny sehetra ara-pinoana maro samihafa eto an-drenivohitra sy ny manodidina.
Fantatra aloha fa maro no manenjika ny FFKM mikasika ny toerana izay misy azy ireo momba ito fampihavanana ito. Voatondro molotra mikasika izany ireo tangala mena sy ny FFM izay toa heno any ambadika any ho manakihana ireto raiamandreny ara-pinoana izay miezaka manao izay eritreretiny fa mety ho an’ny malagasy sy ny firenena. Misy ihany koa no milaza fa misy fiandaniana ito fampihavanana ito. Tsy anjaranay eto amin’ny Malagasy Miray no mitsara izany satria araka ny maha-malagasy miray anay dia ny firaisan-kina no hery ka izay mitambatra ho vato ary izay misaraka ho fasika. Fihavanana sy Firaisan-kina dia anisan’ny soatoavina lehibe roa nampijoro ny fanjakana malagasy izay nisy. Aiza intsony izao ny hoe « trano atsimo sy avaratra, izay tsy mahalen-kialofana »? tamin’ny tondra-drano nisy teto amin’ny firenena farany teo dia maro ireo sary izay mampiseho tokantrano dibo-drano kanefa dia mijanona ao ihany izay mipetraka ao.
Mikasika ireto raiamandreny kristianina izay mampihavana ireto dia toa mahalasa saina ihany ny mikasika azy ireto sy ireo mpiaraka aminy. Firy amin’ny tokan-trano eto an-drenivohitra moa no tsy efa naheno teny toy ny hoe « raha tsy FFKM dia tsy ekenay ho vinanto » na ihany koa ny any amin’ireny fiangonana ireny dia misy ireo mompera na pasitera izay milaza mazava sy mahitsy amin’ny mpino ao aminy manao hoe : « na dia mitory an’i Jesoa Kristy aza ireny dia aza mandeha any aminy fa sekta ireny ». Ary raha ny mpino katolika moa no fantatra fa nandeha tamin’ireny toeram-pinoana antsoina hoe fiangonana zandriny ireny dia mila averina atao « intégration », mijoro ery aloha eny amin’ny hotely vao raisina ho an’isan’ny fiangonana indray.
Misy antony mety marina, ahiahian’ny mpitantana ireto fiangonan-dehibe ireto ho fanodikodinana ny sain’ny mpino sy mahavery ny fanahin’izy ireto izay tsy azo lavina. Kanefa dia ny Baiboly ihany no milaza ny hoe « zahao toetra ny fanahy », « aoka hahafantatra fanahy samy hafa » ary « mba ho iray ihany izy rehetra »
Mbola tsaroanay foana ny fifanenjehan’ny katolika sy ny protestanta fony izahay mbola kely ka dia maro ireo olona heno nifanaratsy sy tsy nifanambady mihitsy. Ary mandrak’ankehitriny dia mbola tsy mahazo mandray any amin’ny fiangonan’ny iray ny mpino avy amin’ny iray. Ankehitriny dia miseho amin’ny fomba hafa indray izany eo anivon’ireo mpivavaka amin’ny fiangonana zokiny (ireo izay avy eo amin’ny fiangonana mpikambana ao amin’ny FFKM) sy ireo avy eo amin’ny fiangonana krisitianina zandriny na ireo antsoin’ireo « zokiny » amin’ny fiteny mahazatra hoe sekta. Dia heno koa izao fa toa misy fizarana roa koa eo anivon’ireo fiangonana zandriny, izay tarihin’i Pasteur Jules Andrianjohary ny andaniny, ary ireo izay tsy tafiditra miaraka aminy etsy ankilany.
Tsy hiady hevitra fombafombam-pivavahana sy dogma isika fa ny tiana ho resahina dia ny momba ny hoe mpampihavana tsy mihavana amin’ny hafa. Raha ny soso-kevitray dia tsara raha mihavana, tsy mifanenjika, tsy mifanaboka aloha ireo karazam-pivavahana kristianina rehetra misy, izay vao mihazakazaka mampihavana ny hafa. Sao lazaina fa mpitari-bato vilam-bava. Raiso ry FFKM ireo izay vonona hifanampy hiara-miasa aminareo dia mba ho iray ihany izy rehetra e.